Maitiro ekugadzira ekuvharira mifananidzo kubva kune aunofarira mapfupi | IPhone nhau
Maitiro ekugadzira ekuvharidzira mifananidzo ewako mapfupi mapfupi
Kushandiswa kwe Shortcuts, kana kutsakatika Workflow, kwaunza nzira nyowani inonakidza yekuwana zvakanakisa kubva pachigadzirwa chedu sezvo izvozvi kwete Siri chete ave akangwara, asi tine akawanda mapfupi izvo zvinotibvumidza isu kuti tiite zvinhu izvo isu tisati tagona kubva kune yedu iOS chishandiso.
Unoziva tine imwe gwara rekupedzisira Yekufupisa kweIOS, asi ruzivo rutsva harumbofi rwukafambidzana nenhau. Muchidzidzo ichi tinokuratidza maitiro aungawedzera mapfupi ako aunofarira kuIOS skrini yekumba. Saka vanozotaridza senge chikumbiro uye unogona kumhanya navo nekukurumidza sezvazvinogona.
Ehezve, aya mapfupi mashandiro ari kuzoita kuti kifaa chedu chinyanye kubatsira, ehe, isu tinofanirwa kuziva maitiro ekuzviwana kana kuzvigadzira iwe pachako Chinhu chekutanga chatichaita kuita yedu yekudimbudzira pachiratidziro cheMapfupi application, uye isu tichaenda kudzvanya pane icon iri kumusoro kurudyi iyo inomiririrwa nemadota matatu (…). Kana isu tachimanikidza, iyo pfupi nzira yekumisikidza menyu inovhura, saka, isu tichaenderera nekutsikirira kamwe zvakare paShare bhatani kuti tinya pa «Wedzera kuchidzitiro chekumba».
Ipapo iyo nzira pfupi ichavhurawo, asi ino nguva yakananga muSafari browser. Kana tangovhura, isu tinodzokorora maitiro nekudzvanya pane iOS Govera bhatani, uye nekudzvanya pane iko kushanda zvakare "Wedzera kuchikona chekumba", Iko zvino apo iyo icon senge chero ipi zvayo ichave yakanamatira kune yekumba skrini. Tichava neicho chiratidzo chinoratidza nzira ipfupi, uye sekuziva kwako, unogona kuchinja pakati pemazana aripo mumenu yekugadzirisa yeimwe neimwe nzira pfupi. Imwe mukana ndeyekugadzira nzira isina chinhu ine icon muvatema, kuti iiswe pane yakasviba kumashure, inoshanda sechiratidzo spacer.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzira ekuvharidzira mifananidzo ewako mapfupi mapfupi
Ikozvino yave pamutemo, WhatsApp inosimbisa kusvika kwematanda kune ayo mashandisirwo
Series 4 kudonha kuwanikwa kwakaponesa hupenyu hwemurume muSweden